Nyagide nju - China Ningbo enweghị
Nyagide nju-adịgide Adịgide Igwe Ọdụdọ + nyagide Mezie (Magnetik Assembly) Ningbo enweghị Magnetik Company Limited manufactures gburugburu, diski, akụkụ anọ & ọzọ ahaziri ekara neodymium magnet na mgbanwe magnet na elu àgwà ike 3M onwe -adhesive teepu, ma ọ bụ nkịtị abụọ-kwadoro nrapado teepu. Na-adịgide adịgide magnetik ihe na-họọrọ ka ọnọ na nrapado etere: NdFeB magnet N35-N54 akara ule na mgbanwe magnet. Conventionally, nyagide etere na-etinyere na N osisi ma ọ bụ S PO ...
Na-adịgide adịgide Igwe Ọdụdọ + nrapado Mezie (Magnetik Assembly)
Ningbo enweghị Magnetik Company Limited manufactures gburugburu, diski, akụkụ anọ & ọzọ ahaziri ekara neodymium magnet na mgbanwe magnet na elu àgwà ike 3M onwe -adhesive teepu, ma ọ bụ nkịtị abụọ-kwadoro nrapado teepu.
Na-adịgide adịgide magnetik ihe na-họọrọ ka ọnọ na nrapado etere: NdFeB magnet N35-N54 akara ule na mgbanwe magnet. Conventionally, nyagide etere na-etinyere na N osisi ma ọ bụ S osisi nke Nickel / Zn / Rubber plated neodymium ígwè boron nju ma ọ bụ un-plated mgbanwe nju. Plating nwere ike kpọmkwem site ahịa.
Nrapado etere: China na-adịghị ahụkebe Earth Igwe Ọdụdọ Limited ọnọde 3M onwe nyagide etere na nkịtị abụọ-kwadoro nrapado teepu na ọkpụrụkpụ: 0.25mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.64mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 3.0mm na na na. Ahịa nwere ike ịhọrọ kpọmkwem 3M teepu nlereanya ma ọ bụ ọkpụrụkpụ dị ka ngwa ahụ n'ezie chọrọ. The thicker nrapado teepu bụ, ike ya adhesiveness ga-adị.
Ugbu a, ndị akacha eji nyagide etere gụnyere 3M467, 3M9495LE na 3M4945.
Ngwa: nrapado mgbanwe magnet e ji na-adịghị ike magnetik ike na mgbanwe na udi ma na magnetization nghazi. Ya mere, ọ na ọtụtụ-eji ihe mmetụta, ngwá na mita, mgbasa ozi, mma, ụmụaka, na kaadị azụmahịa, ekwentị akwụkwọ, na pụkwara n'ihu n'ọrụ na akpakanamde mgbanye, agadi hotel ụzọ mkpọchi, ọgwụ na ahụ ike na-elekọta equipments.
Ma nyagide neodymium adịgide adịgide magnet , ọ atụmatụ ike ndọta na aesthetic anya. Ọ na-eji na switches, ngwá electronic, ma ọ bụ ngwaike nke ụlọ mma, magneto ọgwụ, nke kacha nta ma ọ bụ nnukwu sensọ na n'ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nche na usoro na na.
N'ụkpụrụ nke àgwà, kaadị, price ohere na ozugbo nnyefe, anyị ji obi ụtọ ọhụrụ na ndị agadi ahịa mee ase.
Previous: Magnetik Name Tags
Osote: magnetik njikọ